Tajaajjilli Interneetii lixa Oromiyaa irraa adda cite – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooTajaajjilli Interneetii lixa Oromiyaa irraa adda cite
Tajaajjilli Interneetii lixa Oromiyaa irraa adda cite
ዕለታዊ መረጃ | ኬሎ ሚዲያ (AUGUST 18, 2021)
Keelloo: Hagayya 18,2021
Tajaajjilli Interneetaa Lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa arfan irraa addaan cituun beekame. Tajaajjilli inrlterneetaa kun erga addaan citee torban tokkoof deemaa akka jirus beekameera.
Lixa Oromiyaa keessatti sochiin waraanaa jabaan adeemaa jiraachuun erga dhagaa’amee booda ture tajaajjilli Interneetaa kun addaan cituun kan himame.
Wayiita ammaa Baha Wallaggaa, Lixxa Wallagga, Qellem Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa irraa guutuuutti addaan citee jiraachuun himameera.
Waraana WBO fi qaamolee mootummaa gidduutti adeemaa jiruun godiinaalee kana jala aanaaleef gandoonni jiran dhibbantaan 80 ol harka WBO jala galuu isaanii gabaafama.
Waan waraana lixatti adeemaa jiru ilaalchisuun mootummaan yaada laate hin qabu. Gama isaan WBO’n adamsee waraanaa akka jiruuf, duula waraanaa qulqulleessa qaamolee mootummaa irra jiraachuu ibseera.
Qaamoleen mootummaa WBO’n godina Gujii jalaa aanaalee tohannaa isaa jala galchuu himan
Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n kibba Oromiyaa godina Gujii bahaa jala aanaa jiran qabachuu isaa bulchitoonni mootummaa Aanaa gumii Eldalloo fi Aanaa Liiban BBC afaan Oromootti himaniiru.
Waraanni Bilisummaa Oromoo lola tibba kanaan injifannoo galmeessaa jiraachuu, bakkoota hedduu keessaa caasaa mootummaa lolee baasaa akka jiru ibsu illee gama mootummaan waan ifatti dubbatame jiraachuu baatu, kan amanaa jiran kun isa jalqabaati.
Akka qaamoleen mootummaa kanneen aanaalee lamaan kana bulchan jedhanitti WBO’n gandootas fi magaalaalee aanaa godina Gujii bahaa aanaa Gumii Eldalloo fi Aanaa Liiban jalaa tohannaa isaa jala galcheera.
Waraanni mootummaa bakka sana gadhiisuus himaniiru. Bulchitoonni aanaalee kunneen qaamolee mootummaa dhimma nageenyaa irratti hojjetan illee komataniiru. Isaan dhiisanii bahuutti mufachuu himu. Ofiis baqatanii bakka sana gadhiisuu dubbataniiru.
Jiraattonnii fi hojjetoonni mootummaas WBO dhaan dhuunfatamuu ibsanii jiru. Haa ta’u malee bulchaan godinichaa hanga ammaallee dhimma kana waakkataa jira. Sochiin waraanaa jiraatus WBO’n bakka tohate akka hin qabnetti ibseera.
Waraanni mootummaan lixa Oromiyaa harka keennaa jira
Waraanni mootummaan lixa Oromiyaa harka keennaa jira Waraanni mootummaan lixa Oromiyaa keessatti bobbaafamee jiru Kan…
OMN: Turtii Miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo duraanii wajjin